Taageerada Bukaanka - Daaweynta Daaweynta Proton - Proton California
Adeegyada Taageeridda Daaweynta Daaweynta Kansarka Proton Therapy
Taageerida Bukaanka Kansarka Talaabo kasta oo Jid ah
Ogaanshaha kansarka ayaa isbeddelaya nolosha. Iyada oo ay weheliso daaweyn caafimaad oo heer sare ah iyo kooxda daryeelka bukaanka heeganka leh, in la wargeliyo waxay ka caawineysaa in bukaanno fara badan ay u dabacsanaadaan oo ay ka saaraan shakiga ku xeeran daaweynta. Waxaan taageero u fidinnaa bukaannada kansarka inta lagu jiro nidaamka daaweynta. Waxaan abuurnay hanaanka daaweynta 8-da proton therapy therapy si aan uga gudubno faahfaahin kasta bilow ilaa dhamaad si bukaanka iyo qoysasku ay u dareemaan aqoon iyo kalsooni ku daaweynta. Bukaanno badan ayaa sidoo kale u arka inay ku qanacsan yihiin inay la xiriiraan kuwa kale ee wax ka tari kara walaaca iyo sidoo kale caqabadaha baaritaanka cilmi-baarista xulashooyinka daaweynta. Adeegyadeena bukaan-socodka iyo adeegyada la-talinta, oo ay ku jiraan kuwayaga Barnaamijka Iskuxirka California ee Protons, taageerada nafaqada, bulshada bukaanka toddobaadlaha ah, Iyo booqashooyinka eyga daaweynta sii xoojinta xiriiriyadan maadaama ay gacan ka geysanayaan isu keenida bulshada iyo abuurida dareen guri.
Habkayada Daaweynta Daaweynta Daaweynta 8-Tallaabo
Weydiimaha Hore. Mid ka mid ah isuduwayaasha kiliinikadayada kiliinikada ayaa kula soo xiriiri doona kadib markii la helo macluumaadkaaga caafimaad, oo ay ku jiraan cudurkaaga iyo taariikhdaada caafimaad, si loo oggolaado daaweynta loona abuuro faylka caafimaadka ee rasmiga ah ee bukaanka.
Caymiska Caymiska. Mid ka mid ah wakiiladeena ayaa ururin doona macluumaadka loo baahan yahay si uu u codsado rukhsad caymis daaweyntaada. Wax dheeri ah baro ku saabsan kharashka & caymiska Proton Therapy.
La-tashiga Caafimaadka. Waqtiga ballantan, shucaacaaga oncologist-ka ayaa dib u eegi doona oo kuu sharixi doona habka daaweynta ee lagugula taliyay.
Balanta CT (ST-SIM) Ballanqaad. Waxaad ku mari doontaa "tababar ku celis" oo ay kujiraan sawirka CT iyo aaladda loo yaqaan 'immbilisation customize' si ay kuu diyaarsato oo aad u hubiso in qalabka si sax ah loogu meeleeyay saxnaanta saxda ah ee daaweynta. Waxaa laguugu dheelman karaa qaanso-gaar si gaar ah loogu talagalay ama maaskaro, ama waxaad heli kartaa astaamaha jirka oo ah mid joogto ah (dhibco yar) oo kaa caawinaya isku-habeynta muddada daaweynta.
Qorsheynta Daaweynta. Khabiirkaaga shucaaca ee cudurka shucaaca, oo la shaqeynaya koox ka mid ah dosimetrists iyo takhaatiirta jimicsiga, waxay abuuri doonaan qorshe daaweyn oo gaar ah, iyagoo adeegsanaya softiweer iyo tikniyoolajiyada casriga ah. Shaqada saxda ah oo faahfaahsan waxay u baahan tahay 10 ilaa 14 maalmood oo shaqo, ka dib waxaad ka heli doontaa wicitaan daaweeyaha shucaaca si aad u qorsheysato daaweyntaada maalinlaha ah.
Hubinta Xaqiijinta (V-Sim). Waxaad la kulmi doontaa daaweeyahaaga shucaaca ah iyo koox kaaliyeyaasha daaweynta ah oo kugu bari doona jadwalkaaga maalinlaha ah isla markaana ansaxin doona jagadaada iyo sawirradaada. In kasta oo wakhtiga daaweynta dhabta ahi u dhexeeyo 1 illaa 3 daqiiqo, waxaad filan kartaa inaad ku jirto qolka daweynta illaa 30 daqiiqadood kalfadhi kasta. Waqtigaas, fiidiyowga laba-geesoodka ah iyo maqalka ah ayaa had iyo jeer shaqeynaya inta lagu jiro daweynta si adiga iyo kooxdaada daryeelka u wada xiriirtaan inta hawsha socoto.
Daaweynta Maalinlaha ah. Si la mid ah maalintaada kal-fadhi V-Sim, daaweeyeyaashaada shucaaca ayaa xaqiijin doona booskaaga iyo sawiradaada ka hor intaadan bilaabin daaweyntaada. Qaabkaaga daaweynta ayaa ku kala duwanaan kara iyada oo ku xidhan nooca burada, cabirka iyo meesha. Si kastaba ha noqotee, noocyada badan ee kansarka, iyo xitaa xaaladaha aan kansar ahayn, guud ahaan waa la daaweyn karaa 5 illaa 8 toddobaad.
Daaweynta Kadib. Waxaad ka heli doontaa waraaqihii ugu dambeeyay siideynta bukaanka kalkaaliyaha shucaaca ee shucaaca iyo kooxda daryeelka, kuwaasoo ka wada hadli doona talaabooyinka lagu qeexay qorshahaaga daaweynta ka dib dhammaystirka. Haddii u safrido xarunteenna booqashooyinka dabagalka ama baaritaanno dheeri ah sida shaqada dhiigga ama sawirrada waa dhibaato, waxaad dooran kartaa inaad ku laabato takhtarkaaga cilminafsiga ama takhtarkaaga daryeelka aasaasiga ah ee la-socodka daaweynta ka dib. Qaar badan oo ka mid ah bukaannadeennii hore iyo kuwa hadda jira ayaa la xiriiraya kulanno aan rasmi ahayn iyo barnaamijkayaga Isku-xidhka California Protons.
Adeegyadayada Taageerada Bukaanka
Waxaan aaminsanahay inay jiraan wadiiqooyin badan oo loo bogsado isla markaana habka caafimaad ee guud loo heli karo ayaa caawin kara. Marka loo eego California Protons, bukaannadu waxay ka faa iidaysan karaan waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabaha nasashada iyo nashaadaadka.
Iskuxirka Xiriirka Kaalifoorniya ee California
Bulshada California ee 'Protons Community' waxay isugu yimaadaan:
Munaasabado iyo dhaqdhaqaaqyo gaar ah, oo ay ku jiraan casho toddobaadle ah makhaayadaha maxalliga ah
Barnaamijkeena Horimarinta Protons ee Kaalifoorniya wuxuu ka kooban yahay bukaano hore iyo kuwa hadda jira oo u shaqeynaya sidii nidaam taageero oo midba midka kale u helo
Bog Facebook ah oo loogu talagalay bukaanka iyo shaqaalaha si ay ugu xirnaadaan facebook.com/CalifornProton
Haddii aad xiisaynayso inaad ka mid noqoto Horyaalnimada Kaalifoorniya ee California ama aad wax dheeraad ah ka ogaato California Protons Connect, fadlan noogu soo dir cinwaanka emailka ah: concierge@californiaprotons.com.
Bukaanka Bukaanka Isbuuclaha ah
Waxa marti ku ah Mr. Harrison Miller iyo afadiisa, Mrs. JoAnne Miller, kulanka bulshada ee toddobaadlaha ah ee bukaan-socodka waa kulan cajiib ah oo lagu raaxeysto cunnooyinka iyo la sheekaysiga bukaannada hadda jira iyo kuwii hore ee goob bulsheed. Mid ka mid ah bukaannadii ugu horreeyay ee ku sugnaa Xarunta, Mr. Miller wuxuu aad ugu faraxsanaa natiijooyinka daaweynta kansarka ee proton daweynta wuxuuna bilaabay inuu abaabulo kulannadaas si uu ugu celiyo bulshada proton isla markaana ka caawiyo dadka kale inay isla soo maraan waayo-aragnimo la mid ah.
Isu imaatinka waxaa wada bukaanka bukaanka, waxaana uu ahaa il fiican oo laga helo macluumaadka kusaabsan waxkasta oo laga filan karo daaweynta, meesha la joogo iyo cunista inta la daweynayo.
Ka eeg goobta lagu ordo kulanka toddobaadlaha, maalinta iyo saacadda, ama ka wac Xarunta telefoonka 858.283.4771 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Dhamaan bukaanka hada jira iyo kuwii hore waa la soo dhaweynayaa.
Daaweynta Dog ee Booqashada Bukaanka Daaweynta Kansarka
Booqashada xayawaanka daweynta leh ee caafimaadku waxay ka caawin kartaa inay siiso bukaanka iyo qoysaskooda raaxo, raaxo iyo ka weecinta daaweynta. Waxaa sidoo kale la soo bandhigay si loo yareeyo walbahaarka, loo hagaajiyo niyadda iyo heerarka tamarta, loona yareeyo welwelka.
Xaruntu waxay ku faraxsan tahay inay soo bandhigto booqashooyinka labo eyga gaarka ah ee daaweynta, Howard iyo Lucy.
Howard: Khamiis kasta 9:00 aroornimo 1-2 saacadood
Lucy: Arbaco walba saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo
Haddii aad aragto Howard ama Lucy oo dhex socda Xarunta, waxaan rajeyneynaa inaad xoogaa waqti qaadan doonto inaad dhahdo 'hi' oo aad iyaga siiso hugaan!
Kathryn Holly Retz, oo ah Dietitian Diiwaangashan, wuxuu la kulmaa dhamaan bukaanada usbuuc walba inta ay daaweyntu socoto si loo taageero shaqsiyaadka nafaqada iyo nafaqada u baahan. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku qabataa kooxo nafaqo iyo kansar taageera kooxo mowduucyo kala duwan oo caafimaad la xiriira. Kooxahan taageerada waxay u furan yihiin bukaanleyda oo dhan, waxayna fursad u siinayaan ka qaybgalayaasha inay ballaariyaan aqoontooda ayna la kulmaan dad cusub. Kathryn waxay qaadataa hanaan horumar leh oo aan ka caawinayn oo keliya dhibaatooyinka soo raaca iyo qaadashada cuntada inta lagu jiro shucaaca, laakiin sidoo kale waxay bixisaa talooyin ku saabsan noocyada kala duwan ee kansarka iyo baahiyaha shaqsiyeed ee caafimaadka muddada dheer.
Kooxdayada adeegga koongareesku waxay u heellan yihiin inay ka caawiyaan bukaannada maxalliga ah iyo kuwa ka baxsan -ba inay dareemaan inay guriga ku sii jeedaan inta lagu jiro San Diego. Haddii ay tahay qiime gaar ah oo ku saabsan jiifka, raacitaanka daweynta, talo soo jeedinta makhaayadda ama tilmaamaha booqashada, waxaan halkaan u joognaa inaan ka dhigno waqtigaaga San Diego mid lagu raaxeysto intii suurtagal ah.
Call 858.283.4771 (Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo Waqtiga Pacific) si aad ula hadashid xubin ka mid ah kooxda ilaaliyaha ama email noo soo dir concierge@californiaprotons.com.
Macluumaadka Visa Mareykanka
Su'aalaha ku saabsan caymiska iyo caymiska daaweynta?